Nei zvigadzirwa zvakagadzirwa zvichidhura? | Green Renewables
Adriana | | Kumba Economics, Environment
ari organic zvigadzirwa uye zvakatipoteredza zvine hushamwari zvinodhura kupfuura zvakajairwa. Ichi ndicho chikonzero chikuru nei vanhu vazhinji vasingapedze kana kutenga chigadzirwa chemuchina.
Asi vanhu havazive zvikonzero nei chigadzirwa che organic chiri kudhura.
Izvo zvikonzero zvikuru ndezvi:
Zvigadzirwa zve organic ndezvemhando yepamusoro kupfuura izvo zvinowanzo kutengwa munzvimbo dzese. Ungave chikafu, zvipfeko, zvigadzirwa zvemagetsi, mota, pakati pevamwe. Iyo yakareba kwenguva yakareba mune yepakati term uye mune chikafu chikafu chine zvese zvinovaka muviri zvavanofanira kuve nazvo.
Zvizhinji zvezvigadzirwa zve ecological zvinogadzirwa munzira diki kana yehunyanzvi, saka havana mavhoriyamu makuru ekugadzira uye nekudaro mutengo wekuzvigadzira wakakwira.
Izvo zvavanoshandisa zvavanoshandisa zvinodhura sezvo zviri zvechisikirwo kana zvigadzirwa zvishoma, saka mitengo yacho yakakwira kupfuura zvakajairwa.
Maitiro ekugadzira akareba nekuti vanoshandisa hunyanzvi hushoma uye hwetsika kana echinyakare maitiro.
Zvizhinji zve kugadzirwa kwezvakatipoteredza Ivo vanoshandisa vashandi vanoremekedza zvirevo zviripo. Kune rimwe divi, zvakajairika kuti makambani makuru abudise nekushandisa vashandi vatema kana kunyange kushandisa zvisizvo vashandi.
Zvigadzirwa zve ecological zvine yakaderera nharaunda kukanganisa kwavo mukugadzira uye kazhinji vanoshandisa mashoma simba.
Zvese izvi zvikonzero ndizvo zvinoita kuti zvigadzirwa zve organic zvive zvakachipa pane zvakajairwa.
Asi kana isu tikatarisa mhando uye nguva yezvigadzirwa zvemakemikari tichizvienzanisa neizvo zvakajairika, zvinofungidzirwa kuti zvakakodzera kushandisa pazvinhu zvinogadzirwa kana hushamwari nemhoteredzo.
Izvo zvakakosha kuti maererano nemikana yedu yezvehupfumi isu tinotsigira zvigadzirwa zve organic kuti vakwanise kudzikisa mutengo wavo kana paine kudiwa kukuru uye kwakasimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Nei zvigadzirwa zvakagadzirwa zvichidhura?
Zvigadzirwa, zvishandiso uye zvese zvakaratidzika kunge zvinonakidza kwandiri, asi mune izvo zvinonongedzera kune ndiro yesirivheri, zvinodhura kwazvo, asi zvichiri kunakidza
inonakidza kwazvo 🙂